Dr. Tint Swe's Writings: October 2015
ပင်နီချောရယ်နဲ့ ယောထဘီ ယောထဘီ
အနီရောင်တောရယ်နဲ့ ကချင်လုံခြည် ထီးကိုယ်စီ
အဆိုတော်ချောရယ်နဲ့ မဲပေးကြမည် NLD
(ပုလဲ-မင်းတိုင်ပင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပွဲကို လာရောက်ဝန်းရံကြတဲ့ အဆိုတော်တွေနဲ့အတူ မုံရွာ၊ ဘုတလင်၊ ချောင်းဦး၊ ယင်းမာပင်၊ ဆားလင်းကြီးစတဲ့ ချင်းတွင်းသားများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျက်)
မိခင်စကားမဟုတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအကြောင်းလေး ရေးပါရစေ။ ပြည်ပထွက်နေရတွေ သန်းဂဏန်းမနည်းပါ။ ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေရှိကြတယ်။ အိန္ဒိယမှာနေရတုံးက မေးလာတဲ့သူရှိတိုင်း အကြံပေးရပါတယ်။ ဗြိတိသျှ-အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန်-အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ် အစစ်ကိုသာယူဘို့၊ အိန္ဒိယ-အင်္ဂလိပ်နဲ့ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်တွေကိုမယူဘို့။
ယူအက်စ်အေရောက်ပြန်တော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ကျောင်းမှာ မြန်မာဘာသာပြန်ဆရာလုပ်ရတာမို့ အကြံပေးစရာတွေ ပိုရှိလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုစစ်စစ်တတ်ဘို့မှာ ဘာတွေကအတားအဆီးဖြစ်နေသလည်း။
ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာတော်သူမဟုတ်ပါ။ ပညာရေးဘာသာရပ်ကို လေ့လာထားသူလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော် မြင်တာက မြန်မာပြည်မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်နည်းနဲ့ နမူနာယူစရာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာတွေမှာ လိုနေတယ်ထင်ပါတယ်။
တို့တိတို့တိ နမူနာလေးတွေသာရေးပါမယ်။ Myanmar ကို ဘယ်သူမှ မှန်အောင်မထွက်နိုင်ကြပါ။ My နဲ့ စတဲ့စာလုံးမို့ (မိုင်) သံနဲ့ (မိုင်ယန်မာ) လို့ဘဲ ထွက်တာတယ်။ Kyi ကိုလည်း မှန်အောင်မထွက်တတ်ကြပါ။ အိန္ဒိယ-အင်္ဂလိပ်မှာ R သံကို ပီပီသသထွက်တယ်။ Doctor ဆိုရင် (ဒေါက်တားရ်) လို့ ထွက်ကြတယ်။ အိန္ဒိယနေတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေအတော်များများလဲ အင်္ဂလိပ်စကားထဲမှာ မဆလာနံ့ပါနေတာကို တခြားလူတွေက သတိထားမိကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကတည်းသုံးနေတဲ့ Ka = က၊ Kha = ခ၊ Kya ကြ-ကျ စတဲ့ သင်ရိုးကို ပြင်ဆင်ဆန်းသစ်တာ မတွေ့သေးပါ။ လူနာမည်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုမပေါင်းမဖြစ်ပေါင်းကြရတယ်။ ကျွန်တော်နာမည် နှစ်လုံးစလုံးလည်း အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေက မှန်အောင်မထွက်ပါ။ သူတို့ မမှားဘူးထင်ပါတယ်။
မြန်မာစာ မြန်မာစကားလို ပီသမှန်ကန်ပါစေ။ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လိုမှန်အောင် ပြောဆိုရေးသားဘို့ ကြိုပမ်းသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် (မြန်ဂလိပ်) ဆိုတာ လိပ်နဲ့တူတယ်။ ခေါင်းမဖော်ရဲတဲ့အခါ မဖေါ်ရဲဖြစ်မယ်။ ဘာသာစာပေစောင့်ဥပဒေ ပေါ်ပါစေ။
(တီဘီ) ရောဂါဟာ HIV လိုပဲ သေစေလောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါဖြစ်တယ်
၂၈-၁ဝ-၂ဝ၁၅ နေ့စွဲနဲ့ထွက်တဲ့ ဆေးသုတေသနသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ HIV ကြောင့် လူ ၁့၂ သန်း၊ TB ကြောင့် လူ ၁့၁ သန်း ၂ဝ၁၄ နှစ်တုံးက သေဆုံးခဲ့ရလို့ အဲလိုရောဂါနှစ်ခုကိုယှသ်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ WHO အဆိုအရ TB ရောဂါဟာ ကုသလို့ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်လို့ ဒီကိန်းဂဏန်းဟာ မဖြစ်မသင့်ပါတဲ့။
WHO ရဲ့ Global Tuberculosis Report 2015 အရတော့ TB ကြောင့်သေဆုံးရမှုဟာ ၁၉၉ဝ ကနေတွက်ရင် တဝက်သာ ရှိတော့ပါတယ်။ ၂ဝဝဝ ကနေဆိုရင် ကူးစက်မှုနှုန်းကလည်း ၁့၅% ကျဆင်းပါတယ်။ HIV/AISA ကြောင့် သေဆုံးရမှုကလည်း ကျဆင်းလာပါတယ်။
TB အဖြစ်အများဆုံးက တရုပ်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတြာတွေက လူဦးရေလည်းများတဲ့တိုင်းပြည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တုံးက TB ကြောင့် လူပေါင်း ၁့၅ သန်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီထဲမှာ AIDS ပါတွဲရှိနေလို့ AIDS စာရင်းထဲမှာ ပါနေပါတယ်။
TB မှာ ဆေးယဉ်တီဘီဖြစ်လာတာက ပိုပြီးခက်ခဲစေပါတယ်။ တီဘီ လူနာသစ် ၁ဝဝ တွေ့တိုင်း ၃ ယောက်က ဆေးယဉ်နေကြတယ်။
WHO ရဲ့ TB မဟာဗျူဟာက နောက်နှစ်မှာကုန်ဆုံးဘို့ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၃ဝ ရောက်ရင် TB ကြောင့်သေတာကို ၉ဝ% လျှော့စေမယ်လို့ မှန်းထားပါတယ်။
မဲစာရင်းထဲမှာ လူအပိုတွေပါနေတယ်။ တကယ်နေထိုင်သူထက် မဲစာရင်းထဲကလူစာရင်းဟာ နမူနာနည်းနည်းသာ သိရတယ်။ မန္တလေးမဟာအောင်မြေမှာ ၂၅% ကနေ ၆၈% ပိုနေ။ နေပြည်တော်ကောင်စီမှာ ၆ သောင်းပိုနေ။ တောင်ဥက္ကလာမှာ ၉ သောင်းပိုနေတယ်။ အဲလိုပိုတာတွေက လက်ရှိအစိုးရထဲမှာ ပါနေသူတွေ အရွေးခံကြမယ့်နယ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။
ကြိုတင်မဲထည့်ရမယ့်မဲပုံးတွေမှာ ချိတ်ပိတ်ထားတာကမသေချာတာတွေ့ရတယ်။ ကော်မရှင်က တိုင်တန်းတာတွေကို အရောင်ဆောင်လုပ်ပြလို့၊ အမှားကြီးတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆက်သွားပါတော့မယ်။
၁၉၉ဝ တုံးက NLD ပါတီရဲ့ အမှတ်အသား ခွပ်ဒေါင်းကိုသုံးမဖြစ်အောင်၊ ပါတီအမှတ်အသားမှာ အကောင်တွေမပါရလို့ ဥပဒေထုတ်ခဲ့တယ်။ ၂ဝ၁၅ မှာ သူတို့အကောင်ကပိုကြီးတယ်။ ၂ဝ၁၅ မှာ NLD ရဲ့ ကြယ်ဖြူကို အဖြူမထင်အောင် မဲစာရွက်စက္ကူကို အဖြူမသုံးပါ။
မဲတကယ်ပေးတဲ့သူတိုင်းရဲ့ လက်သန်းမှာ Indelible ink တော်တော်နဲ့ဖျက်မရတဲ့မင်တို့ပေးမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကုန်တဲ့စက္ကူတန်ဖိုးနဲ့ မင်တန်ဖိုး အချိုးမကျပါ။
စက္ကူတရွက် မင်တစက် အမဲဖျက်မယ့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။
ကော်မရှင်မျက်နှာမှာ ရာသတ်ပန်ဖျက်မရတဲ့မင်ကို ကိုယ်တိုင်သုတ်နေတယ်။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = အန်ကယ်ရေ ... သမီး သျှီပါ ... ဒီနေ့ ပုလဲမှာ သွားဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ် ...
ကွန်မင့်တခု = Tun Tun Naing လမ်းမှာဖွတ်တွေကနှောက်ယှက်သေးတယ်ဆိုဆရာရေအတည်ပြုပေးပါဦးခင်ဗျ
ရီပလိုင်းတခု = Tint Swe ဆရာ ရေးထားပြီးပါပြီ။
ကွန်မင့်တခု = Tun Tun Naing ဟုတ်ဆရာ ကျတော်ခုမှလိုင်းပေါ်တက်လာလို့ပါဖတ်လိုက်ပါဦးမယ် ကျေးဇူးပါဆရာ
ပုလဲ၊ မုံရွာ၊ ပေတရာပေါ်ကသတင်း ကျွန်တော့်ဆီ ချက်ချင်းရောက်တယ်။ (ကြွားတာ)
တခါတခါ မလုပ်သေးတာ ပေါက်ထွက်လာကိုပါရတတ်တယ်။ (ပိုကြွားတာ)
တခါတခါ ပြောမကောင်းလို့ မပြောတာလည်းရှိသေးတယ်။ (အကြွားဆုံး)
အနာဂတ်ကိုလည်း အကဲဖြတ်မညံ့ပါ။ တကယ်ပြောတာ။
Alinka Monywa ဆရာအခု မဲပြားမှာ ကြယ်ဖြူက ကြယ်ဝါဖြစ်နေပြီတဲ့ဆရာ အဲဒီအကြောင်း လူထုသိအောင် ပြောကြားပေးပါဦး။
ဟုတ့့် မနေ့ညကတွေ့လိုက်တယ်။
- မိုးပေါ်မှာ ကြယ်တလုံး တိမ်ဖုံးပါလို့ လမသာ
- သာတဲ့ခါ သာပါလိမ့် နတ်ဒေဝါ သူဖန်ဆင်း ဖိုးရွှေလမင်း
- ကြယ်အဝါ ထုံးဖြူသုတ် အကြံယုတ်ပါလို့ မဲပြားမှာ
- ဝါတဲ့ခါဝါပါလိမ့် ကော်မရှင် သူဖန်ဆင်း အာဏာရှင်ဘယ်လိုငြင်း
မှတ်ချက်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အသုံးစရိတ် (၆၈) ဘီလီယန်ကျော်သည် ဆေးအဖြူဝယ်ယူရန်လောက်ငခြင်းမရှိ။ စက္ကူအဝါသုံးထားခြင်းကို သည်းခံပါရန်။
သမီး သျှီပါ ...
ဒီနေ့ ပုလဲမှာ သွားဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ် ...
လမ်းခရီးမှာ တဖက်အသင်းက ကားတွေ ရုတ်တရက် လှည့်ပြီး ပုလဲကို မှောင်မှရောက်ပေမယ့် ...
လူထုက စောင့်နေတော့ အင်မတန်ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ် ...
ပုလဲသားတွေ တကယ်သွေးရဲပါတယ် ...
အန်ကယ့်ကို သိစေချင်လို့ပါ ...
Than Tha Win added 8 new photos.
မျက်စိတဆုံး ပုလဲမြို့ ၂၁မြို့မြောက်
Follow · 12 hrs near Yinmabin, Myanmar ·
ပုလဲမြို့က သွားခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲမှာ စံချိန်တင်ပဲ ...
ညမိုးချုပ်တဲ့အထိ လူသိန်းချီပဲ ...
သူတို့ရဲ့ မာန်နဲ့ဟစ်ချီတဲ့ အသံတွေက သွေးပျက်လောက်စေတယ် ...
ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ပုလဲက ပြည်သူပြည်သားတွေ ထောက်ခံအားပေးလိုက်တာပဲ
"မြန်မာပြည်က ရဲရဲတောက် စိတ်ဓါတ်ကို ကြည့်ချင်ရင် ပုလဲကိုကြည့်"
ချင်းတွင်းဒေသကို တပင်တပမ်းလာရောက်ဖျော်ဖြေကြတဲ့ အနုပညာရှင်အားလုံး (အားလုံး) ကို အများကြီးကျေးဇူတင်ပါတယ်။
မင်းတိုင်ပင်ပွဲမှာ နေ့စားမပါတာ ဟုတ်မယ်။ ဒန်ပေါက်လည်း မကျွေးဘူးပေါ့။
မုံရွာကလာကြတဲ့ ဆရာ့တူတွေကတော့ မင်းတိုင်ပင်က သူတို့အမအိမ်မှာ ထမင်းစားကြတယ်။ နေ့တွက်ကို မိဘတွေဆီက တောင်းလာကြတယ်။
မင်းတိုင်ပင်တရွာလုံးလည်း ဧည့်သည်မကျွေးရတဲ့အိမ် မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်။
ဆရာလာရင်လည်း ဟိုအိမ်သည်အိမ် လှည့်စားအုံးမှာ။ ဆရာမထွက်ခင်က နောက်ဆုံး ညလည်စာ မင်းတိုင်ပင်မှာ စားခဲ့တယ်။ အဒေါ်က အကြော်စုံနဲ့ ရေနွေးနဲ့ ကျွေးတယ်။
Photo of Yoon Lay
ပို့စ်တခု = Alinka Monywa ကင်းဝန်မင်းကြီးနယ်မြေက မင်းတို့မုံရွာအားပေးတာ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်တဲ့ဗျာ။ ခန့်မှန်းခြေ မုံရွာလူထုထက် ၅ ဆ ပိုလောက်တယ်။
အဲတာက မုံရွာသူကပြောတာ။ ကျွန်တော်ရေးရင် ဘက်လိုက်တာ လူသိသွားမယ်။ နောက်တယောက် ပုလဲသား။ သူကတော့ ကျွန်တော့်လို မကြွားအား။
ဆရာ့့ ဆရာပို့စ်တင်ပေးတာ စွမ်းတယ်ဆရာ။ မဟာဒုတ် ဆရာလုပ်လိုက်လို့ ဒီကနေ့ စတိတ်ကို နှောက်ယှက်ပြန်ပြီ။ လေးမြို့နယ် ငွေပေးလူငှါးတွေ၊ ကားငှါးတွေနဲ့ အလှပြယာဉ်တန်းနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ တနေ့ထဲချိန်ပြီး လက်တောင်းကြီး မြောက်ဖက်ကနေ ကန့်ဒေါင့်အထိ ယာဉ်တန်းနဲ့ နှောက်ယှက်တယ်ဆရာ။ လူထုကသည်းခံပြီး၊ ထီးမိုးပြီး၊ မိုးကိုအန်တုပြီး၊ အားပေးတယ်ဆရာ။ ဒီပို့စ်လဲ တင်ပေးပါအုံးဆရာ။
သည်းခံခြင်းအကျိုး၊ မိုးကိုတောင် အန်တုရဲတဲ့ ဇွဲနပဲ၊ ကဲ့့ ကင်းဝန်မင်းကြီးဆီကို ထဘီပို့ချင်တဲ့ စုဘုရားလတ် ဘာတတ်နိုင်သေးလည်း။ ကင်းဝန်သွေးမည်သည် နီစရာရှိမှ နီပြတယ်။ ကင်းဝန်မြေမှာ အောင်မြေနင်းနေကြတယ်။
ပရိတ်သတ်က တအားများ၊ ငါမသွားလိုက်ရပါလားပြောတဲ့ကပြောတယ်။ ငါသွားရင် နေရာမှရပါမလားလို့ ထင်အုံးမယ်။
နတ်သက်တမ်းကလည်းရှည်၊ နတ်ပြည်မှာ နတ်ဦးရေတိုးလာရင် ကြာတော့ မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်မှာ နေရာဆန့်ပါမလားလို့ ခပ်ကပ်ကပ်မေးတော့ သစ်သားတချောင်းထဲ သံချောင်းကို တူနဲ့ရိုက်သွင်းပြလိုက်တယ်။
နတ်ပြည်မှာ နတ်ဦးရေတိုးတာက ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်။ ကော်မရှင်မဲစာရင်းမှာ မဲပေးနိုင်သူဆိုပြီးတိုးတာက ပြောင်းပြန်ယူသော်ရ၏။
Photo of Monywa NLD election campaign
မုံရွာ၊ မင်းတိုင်ပင်ကလူတွေကိုကြည့်ပြီး ပြောကြတယ်။ မဲပေးနေစရာလိုသေးလားတဲ့။
၁၉၈၈ တုံးကတော့ လူထုက တပါတီကြိုက်သလား၊ ပါတီစုံကြိုက်သလားဆိုတာ ဗိုလ်နေဝင်းကနေ ဦးတင်အောင်ဟိန်းကို စုံးစမ်းဘို့ တာဝန်ပေးတယ်။
လူတွေက တခွန်းတည်းပြန်ပြောကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မြင်နေမှတော့ အပျိုလားလို့ ဘာလို့ အမေးခိုင်းနေတာလည်း တဲ့။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = I really love to vote လူကြည့်ပြီး မဲပေးတယ်
Linn Linn ဆရာမဲပေးခွင့်ရလား
ティンティン ウ ဆရာက မဲပေးလို့မရဘူး
Tint Swe မဲပေးခွင့်ဘယ်နားမှန်းမသိ၊ အရွေးခံခွင့် ၁ဝ နှစ်မရှိ၊ မဲဆွယ်ခွင့်ရနေလို့ တော်သေး၏။
မုံရွာမှာ NLD မဲဆွယ်ပွဲကအမှိုက်တွေကို စနစ်တကျနဲ့ လိုက်ကောက်ကြတယ်။
တယောက်ကရေးတယ်။ အစကတည်းက အမှိုက်မပြစ်ကြရင် ကောင်းတာပေါ့တဲ့။
ဟုတ့့် အဲဒါက နောက်တဆင့်ပါလို့ ရေးလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘဝက အဲလို အမှိုက်သိမ်းခွင့်ရအောင်ကိုက အနှစ် ၂ဝ ကျော်လုပ်ခဲ့ကြရတယ် မဟုတ်လားဗျာ။
အခုက ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်သိမ်းတာ။ သူများတွေစွန့်ပြစ်ထားတဲ့အမှိုက်သရိုက်တွေ သိမ်းနိုင်ရေး မဲပေးကြရအုံးမှာ။
အခု မင်းတိုင်ပင်မှာ အနုပညာသည်တွေ ဖျော်ဖြေမဲဆွယ်နေကြပြီ။ မင်းတိုင်ပင်မရောက်ခင် ပုလဲအထွက် လက်ပုကန် နားလောက်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ကား အစီး ၃ဝ လောက်နဲ့ အပြိုင်သီဆိုနေကြသတဲ့။ မနေ့ညကတည်းက ကားအစီး ၅ဝ နဲ့အားပြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းက ရထားပြီးသား။
မုံရွာကနေ အဆိုတော်တွေလာတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာလည်း ရွာတိုင်းကနေထွက်ကြိုကြတယ်။ ယင်းမာပင်ရဲကနေ ကူညီလမ်းရှင်းပေးရသတဲ့။
သုံးသပ်ကြတာကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးထဲက အကြီးစား ၂ ယောက်ရဲ့နေရာတွေက ဘုတလင်နဲ့ ပုလဲ။ မုံရွာနားကချည်းပဲ။ ဘုတလင် မောင်းထောင်ပွဲကလည်း စည်ကားသိုက်မြိုက်၊ မုံရွာဆို သူများတွေလိုက်မမီလောက်ဘူး။ မင်းတိုင်ပင်မှာလည်း ဝက်ဝက်ကွဲ။ အဲတော့့ ဗိုလ်ကျော်ဆန်းအနေနဲ့တော့ အင်အားပြခွင့်ရလိုက်လို့ နည်းနည်းတော့ ကျေနပ်ကောင်း ကျေနပ်မယ်တဲ့။ ဗိုလ်သာအေးကတော့ နားရွက်တံတွေးဆွတ်ခံလိုက်ရသတဲ့။
မုံရွာက စာရေးဆရာတယောက်က ရေးထားတယ်။ ဒါတောင် ရေမချိုးရသေးဘူးနော်၊ ဒေါ်စုလာတာ မဟုတ်သေးဘူးတဲ့။
အဲတာပဲပေါ့ဗျာ လူကြည့်ပြီး မဲမပေးပါနဲ့ဆိုတာ။ ကျွန်တော်တော့ မဲပေးကြမယ့်လူတွေကြည့်ပြီး မဲပေးချင်လာပြီ။
- ဒါက ကျွန်တော့်အမေ့ရွာ ပုလဲအနောက်က မင်းတိုင်ပင်မှာ
- ပရိတ်သတ်က ကျွန်တော့်အဒေါ်ရဲ့ လယ်ကွက်ထဲမှာ
- စိတ်လှုပ်ရှားမှုက ၈၁၈၃ မိုင်ဝေးတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ
Photo: Nyo Htay Pale
- ဒီပနီတွေ များစွာရေးခဲ့တဲ့နေရာ
- သည်တချည် အနီတွေများစွာ အရေးပြလိုက်တဲ့နေရာ
- အမြိုက်တရားတွေရေးသားခဲ့တဲ့ လယ်တီရဲ့ မုံရွာ
- အမှိုက်တရားတွေပြ လှလိုက်တဲ့ ဇလုတ်ရဲ့ မုံရွာ
တူတော်မောင်ရဲ့ပုံကို တွေ့တာနဲ့့
အေးကွာ မင်းက စီးချင်းထိုးမှာဆိုရင်တော့ ရန်သူချိုင်းကြားက ချပ်ဝတ်တန်းဆာချည်တဲ့ကြိုးနေရာကို တည့်တည့်သာ ချိန်ထိုးပေတော့။
ရာဇဝင်အားကိုးနဲ့သာ ပြောတာပါကွာ။ အခုခေတ်မှာက ချိုင်းမြင်ရအောင် လက်မြှောက်တာ စောင့်စရာမလိုဘူးဟေ့။ အာချီးလိစ် ဖနောင့်က ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပြီကွ။
- ကော်မရှင် မှားပြလေလေ၊ လူထုက အားပြလေလေ၊
- တဖက်လူတွေက ဓါးပြလာတော့ သည်ဖက်ကလူတွေက ပိုပြီးအားပြချင်ပေါ့၊
- ကော်မရှင် မဲစာရင်းတိုးတော့ လူတွေက သွားလေရာကျိတ်ကျိတ်တိုး၊
- အနုပညာသည်တွေလာတဲ့ မုံရွာမှာ ကျောက္ကာလမ်းကြီး ခွက်ဝင်သွားပြီတော့။
Long hours, meager wages: Child labor continues in Myanmar အယ်လ်ဂျာဇီးရာ တီဗွီကနေ ၁၃-၄-၂ဝ၁၅ နေ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် မနက် ၆ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိ ပန်းကန်ဆေးတဲ့အလုပ်သမားလေး ၁၂ နှစ်သား မောင်စိုးမင်းလွင်၊
မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွါးရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာ ၂ဝ၁၁ မှာစခဲ့တယ်။ တောနယ်တွေကလေးတွေ ပိုပြီး မြို့ဖက်ဆီရွေ့ကြရတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ပန်းကန်ဆေး၊ စားပွဲထိုးအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။
UNICEF ကရတဲ့ ဒေတာတွေအရ ကျောင်းနေကြရမယ့် အသက် ၇ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်ကလေးတွေရဲ့ ၃၃% ဟာ အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။
International Labor Organization (ILO) ကနေ အဲတာကိုပြင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတော့နေပါတယ်။ ဥပဒေသက်ရောက်မှု မရှိတာက အခက်အခဲကြီးဖြစ်နေတယ်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်ကတည်းက ကလေး အသက် ၁၃ နှစ်အောက် အလုပ်မခိုင်းရဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ၁၃ နှစ်ကနေ ၁၅ နှစ်အထိကလေးတွေကိုလည်း တနေ့မှာ ၄ နာရီထက်ပိုမခိုင်းရလို့ပါတယ်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်္ဘာလထဲက မြန်မာလွှတ်တော်ကနေ ILO convention ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ ကလေးလုပ်သား၊ ကျွန်ပြုခြင်း၊ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ ကလေးတွေအသုံးမချရေးတွေ ပါဝင်တယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုဟာလည်း ကလေးတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာရဲ့ အကြောင်းခံနောက်တချက်ဖြစ်တယ်။
အသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေး ၅ ယောက်မှာ ၃ ယောက်က အာဟာရချို့တဲ့နေကြပါတယ်။ လူ (ကလေး) ပွဲစားတွေကို ငွေပေးပြီး ကလေးအလုပ်သမားရှာခိုင်းတားတယ်။
စိုးမင်းလွင် မိဘတွေက ရန်ကုန်နဲ့ ၅၅ မိုင်ဝေးတဲ့ဆီမှာနေကြတယ်။ လစာ ၃၅ ဒေါ်လာအိမ်ပြန်ပို့နိုင်တယ်။ သူ့အမေက ဆန်တအိတ်ကို ဒေါ်လာ ၂ဝ ပေးဝယ်ရပါတယ်။
• ငါကြီးလာရင်ဘာလုပ် ခရိုနီကြီး မလုပ်၊
• နေပြည်တော်သားကြီး မလုပ်။
• လူကြီးတွေပြောနေတာကြား၊ စစ်သားတဲ့၊ နိုင်ငံခြားသားတဲ့၊
• အသားဖြူဖြူ ဗမာစကားမတတ်သူ၊ ဒီလူတွေက မိုးပေါ်ကကျ၊
• ကျွန်တော့်နေ့လည်စာနဲ့ ဆိုင်သလားဗျ။
• ဒို့မူလတန်းကျောင်းသားဂျင်နရေးရှင်း၊ အားခဲလို့သာတင်း။
Milestone prostate cancer drug ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆေး သမိုင်းမှတ်တိုင်
၂၉-၁ဝ-၂ဝ၁၅ နေ့စွဲနဲ့ထွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသရာမှာ ပဌမဆုံး DNA mutations မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲတာကို ပစ်မှတ်ထားပြီးကုသနိုင်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သမိုင်းမှတ်တိုင်တခုပါ။
လန်ဒန်က Institute of Cancer Research သူတေသနဌာနကနေ ဆေးကုလို့မရနိုင်တဲ့ လူနာ ၄၉ ယောက်ကို စမ်းပြီး ထွက်လာတဲ့အဖြေဖြစ်တယ်။ Olaparib လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ ကင်ဆာအကျိတ်ကြီးလာမှာကို ၈၈% နည်းစေတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
Herceptin ဆေးကို ရင်သားကင်ဆာကိုကုသရာမှာသုံးတာကလည်း အဲလိုဆေးမျိုးဖြစ်တယ်။ လူနာတချို့ကိုသာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
အခုသုတေသနမှာ လူနာ ၁၆ ယောက်ထဲက ၁၄ ယောက်မှ ဆေးစွမ်းပြတာတွေ့ရပါတယ်။ ၆ လ ကနေ တနှစ်ခွဲကြာမှ အဲလိုပြတာပါ။ လူနာတွေ အသက်ပိုရှည် မရှည်အတွက်တော့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့လေ့လာမှုလိုပါသေးတယ်။
• ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်
• ဓါးရေးပြတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ
• ပြည်သူတွေက အားပြ၊
• ကော်မရှင်က မှားပြ၊
• အလိုတော်ရိတွေက ဓါးပြ၊
• အမုန်းတရား အစွမ်းပြ၊
• မေတ္တာတရား လမ်းပြ၊
• ပြည်သူ့အားနဲ့ အနိုင်ယူကြ။
ဆရာတင်တဲ့ post ကိုတော့ မဖတ်ဖူးပါ။ ဆရာ့နာမည်သုံးထားတာ ဆရာသိစေချင်လို့ အသိပေးခြင်းမျှသာပါရှင့်။
ဟာ့့ လန့်သွားတာအမှန်ပဲ။ မူရင်းဝဘ်ဆိုက်တွေ လိုက်ရှာရတယ်။ ရီဗျူးတွေ ပြန်ဖတ်ရတယ်။ ကိုယ်ရေးတာ ပြန်ဖတ်ရတယ်။
Early ejaculation (1) သုတ်လွှတ်စောခြင်း (၁) ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ရေးတာက သည်လိုသာရေးပါတယ်။
ဆိုးတဲ့နေရာမှာ အခုလိုချီးမြှောက်ခံရလို့ ကျွန်တော်နာတာထက် အညာခံရသူတွေက ပိုနာပါလိမ့်မယ်။
- စာရွက်ပေါ်မှာ အသံကောင်းဟစ်၏။
- ရေဒီယိုအင်တာဗျူးမှာ လက်ရေးလှလှရေး၏။
- လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်၏။
- ဓါတ်မီးတိုင်မှာ ဖရောင်းတိုင်ထွန်းထား၏။
- ဗိုက်မှာလူတွေ ရွံ့ပေနေ၏။
- ဖွဲ့စည်းပုံမှာ စည်းပုံဆောင်းထား၏။
ကနေ့ည အိမ်မှာလာပြီး မီးထွန်းကြတယ်။ စတိသဘောပါ။ ဒီမှာပဲမွေးတဲ့ မြေးနံပါတ် (၄) က ဘာလို့ဒီနေ့ညမှာ မီးထွန်းကြသလည်း မေးလို့ သူနားလည်အောင် ရှင်းပြရသေးတယ်။
လူသစ်တွေနဲ့ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက် နောက်တခုထပ်တင်ပါရစေ။ မက်ဆေ့နဲ့ ချတ်ဘောက်စ်ကနေ Hell, Hi နဲ့ မင်္ဂလာပါဆိုပြီး ရေးနေတာတွေရနေပြန်လို့ပါ။ နှုတ်ဆက်တာကို ပြန်မပြောရင် ရိုင်းရာကျမှန်းလည်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ အလာပသလာပပြောချိန်မရှိပါ။
ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတယောက်က ပြောတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ပုံသေနှုတ်ဆက်စကားမရှိပါဘူး၊ သင့်သလို ပြောဆိုမေးမြန်းကြတာပဲရှိတာပါ။ မင်္ဂင်္လာပါ ဆိုတဲ့စကားက ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတွေက တမင်ထွင်ပြီး ပလီခဲ့တာပါ။ အဲသလို နှုတ်ဆက်လာရင် ကျွန်တော်က ပြန်ပြောပါတယ်၊ မာလကာပင်လို့။
ကျွန်တော့်အရင် ပြည်ပရောက်နေသူတဦးကလည်း Good morning နဲ့ မင်္ဂလာပါ မတူတာကို ပြောဘူးတယ်။ သူ့အင်္ဂလိပ်က ကောင်းပါတယ်။ သူ့ကို မြန်မာအချင်းချင်းကနေ မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ရင် စိတ်တိုရော။ How are you? ရဲ့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နေကောင်းလားပါ။ ကျွန်တော်တို့က ပြောနေကြမဟုတ်ပါလား။
အမေရိကားမှာ လူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင် ဒီလိုတွေသုံးနှုန်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။
• How are you? Howre you?
• How ya doin?
• Hows everything going?
How are you doing? နဲ့ How are you? ကတူတယ်။ What are you doing နဲ့ မတူပါ။ ဘာလုပ်နေသလဲလို့ မေးတာသာဖြစ်တယ်။ နှုတ်ဆက်စကားမဟုတ်ပါ။
• (Hey) Whats up (man/dude/bro/their name)?
• (Hey) Good to see you.
• (Hey) How are things (with you)?
• Hows life been treating you?
• Whats good?
• Whats happening (happenin)?
• (Hey) Hows it going (goin)? အဲလိုပြောလာရင် Its going good. လို့ဖြေပါမယ်။
• Whats cracking (crackin)? ရွယ်တူအချင်းချင်းသာ သုံးသင့်တယ်။ Whats up? နဲ့ အတူတူဖြစ်တယ်။
(ဂ) မတွေ့တာကြာနေသူကို ပုံစံတကျနှုတ်ဆက်ရင်
• It has beenalong time.
• Its been too long.
• What have you been up to all these years?
• Its alwaysapleasure to see you.
(ဃ) မတွေ့တာကြာနေသူကို ပုံစံတကျမဟုတ်တဲ့နှုတ်ဆက်ပုံ
• Where have you been hiding?
• Its been ages (since I’ve seen you).
• How’ve you been?
• How do you do? က အများဆုံးသုံးတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်။
• How do you do? လို့ပဲပြန်ပြောကြပါမယ်။
• How are you? နဲ့ How are you doing? ဆိုတာ မေးခွန်းသဘောဖြစ်လို့ Fine, Thanks!, Very well, Thank you လို့ ပြန်ဖြေကြပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေက ဘယ်လိုပြန်ပြောပြော နားလည်ခွင့်လွှတ်ကြပါသတဲ့။
မင်္ဂလာပါဆိုတာ အင်မတန်ယဉ်ကျေးတယ်။ ဘာသာပြန်ရာမှာတော့ မဆီလျှော်လို့ထင်ပါတယ်။
ခုတလော သီတင်းကျွတ်လပြည့်လည်းဖြစ်လို့ မီးပုံးပျံသတင်းတွေ တွေ့ရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက လွှမ်းမိုးထားလို့ မီးလောင်သွားတဲ့မီးပုံပျံသတင်းကို လူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်။
အခုရွေးကောက်ပွဲက ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ ပါတီစုံပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပဌမစခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်းထဲမှာ ပထမဆုံးသမ္မတ စဝ်ရွှေသိုက်၊ ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုကနေစပြီး မီးပုံးပျံ ဦးကျော်ရင်နာမည်လည်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ၅ တန်းတက်တော့ သင်ရတဲ့ မြန်မာဖတ်စာ အာဇာနည်စာအုပ်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ မဟတ္တမဂန္ဒီ တို့နဲ့အတူ မီးပုးပျံ ဦးကျော်ရင်အကြောင်းလည်းပါတယ်။ စစ်အစိုးရတက်ကတည်းက အာဇာနည်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထုံးသုတ်လာခဲ့တယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်တဲ့ အာဏာယူပါတီကလူကြီးတယောက်နေ အာဇာနည်ဗိမာန်ဗုံးခွဲတာနဲ့ NLD ပါတီရဲ့ အနီရောင်ကို နှိုင်းပြောသေးတယ်။ နည် နဲ့ နီ မတူတာသိပုံမရပါ။
Photo from Maung Tun Wai
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ဝန်းကျင်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာအရ မိဘနဲ့ဆရာတွေကို ကန်တော့ကြတယ်။ ကျွန်တော်က အသက်ကြီးတဲ့အပြင် သမားဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်လို့ အဝေးကနေလှမ်းပြီး မှန်းဆကန်တော့ကြတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ ဇနီးသည်ကို စုံညီကန်တော့တဲ့အခါ ဆုတောင်းပေးရတဲ့တာဝန်ကို ဇနီးကသာ ယူရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပါဠိစာတွေ မရွတ်တတ်ပါ။ ကျွန်တော်စိတ်ထဲက ရွတ်ဆိုတဲ့ဆုတောင်းစကားကတော့ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ အန္တရာယ်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပါစေ၊ ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ။
ကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေဖြေရာမှာလဲ အဖြေရဲ့အဆုံးမှာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ရေးဖြစ်အောင် ရေးပါတယ်။ (အီးမေးလ်ကနေသာဖြစ်ပါတယ်။)
ဒေလီမှာနေရတုံးက အိမ်ကနေဆေးခန်းကို ရာသီဥတုသာရင် ကျောပိုးအိတ်တလုံးနဲ့ လမ်းလျှောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ တနေကုန် ကီးဘုတ်သာနှိပ်နေတဲ့ကျွန့်အဖို့မှာ အဲသည်အချိန်ဟာ သီးသန့်အားလပ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းလာမယ့် လူနာတွေအတွက် ဆုတောင်းရင်းသွားပါတယ်။
သည်တိုင်းပြည်မှာတော့ ဆေးခန်းဖွင့်ကုသပေးရတဲ့လူနာ မရှိတော့ပါ။
အခုအိပ်ယာဝင်ဆုတောင်းအသစ် ထည့်လိုက်ပါပြီ။ ကနေ့ကျန်းမာရေးမေးလာသူအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ၊ အန္တရာယ်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝကြပါစေ။
ဆုပေးတာပြည့်သလား။ အလှူခံသူနဲ့ အလှူပေးသူလိုပါပဲ၊ နှစ်ဘက်ပြည့်စုံနေရပါတယ်။ ယုံကြည်မှုနဲ့ ထက်သန်မှုတို့ ကနေရလာမယ့်အကျိုးဟာ အချိုးညီတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ကျွန်တော့်ဓါတ်ပုံ မဟုတ်ပါ။
• မင်းတို့က နေ့တွက်မပါ၊ လစာလည်းမရ၊ လုပ်နေကြလည်း လနဲ့ချည်၊
• ဆယ်လ်ဖီ မတင်အား၊ စားဝါးနေတာလည်းမပါ၊ နပ်မမှန်ကြတာ ငါသိ၊
• တနှစ်ရှိ တတန်းမတက်ရ၊ ၅ နှစ်မှတခါ၊
• တို့ဆောက်နေကြတာ သဲပုံစေတီမဟုတ်၊ ဆိုင်းဘုတ်လည်းမပါ၊
• ခြပိုးတောင်ဟာ ခြတွေအတွက်တော့ နေချင်စရာ၊
• ငါ့တောင်ပို့ဟာ အတောင် ၆ဝ ကျော်လာ၊
• မကြာခင်မှာ မင်းတို့ချတဲ့သက်ပျင်းသံကိုသယ်လာမယ့် လေယာဉ်ပျံဟာ ငါ့ဆီကိုဆိုက်တော့မှာပါ၊
• အဲတော့့ ငါမြင်မြင်သမျှဟာ သပြေပင်ပေါ့ကွာ။